E wepụtalarị Redis 6.0 wee bịa na ọtụtụ ndọtị ama ama | Site na Linux
E wepụtalarị Redis 6.0 wee bịa na ọtụtụ ndọtị ama ama
Versiondị ọhụrụ nke Redis 6.0 dị ugbu a mgbe ọnwa anọ nke ntọhapụ nke RC1. Maka ndị na-amaghị Redis, ị kwesịrị ịma na nke a bụ sistemu njikwa njikwa nchekwa data nwere ike dee na ANSI-C ma kesaa n'okpuru ikikere BSD.
Nke a anụ version abịa na ama mgbanwe ka ọhụrụ atụmatụ, dị ka nke ọhụrụ RESP3 protocol, ọrụ ahụ "Oghere ndị ahịa-akụkụ", ACL (ndepụta njikwa ohere), iwu Redis, faịlụ RDB, wdg.
Redis 6.0 Key New Atụmatụ
Otu n'ime akwụkwọ akụkọ ọhụrụ nke ụdị ọhụrụ a bụ RESP3, usoro ohuru ohuru, nke dị ka ndị mmepe ya si dịs dị mkpa n'ihi na usoro ochie, RESP2, ezughị ezu. Isi echiche dị na RESP3 bụ ikike ịlaghachi ụdị data dị mgbagwoju anya ozugbo site na Redis, na-enweghị onye ahịa ga-ama ụdị nke ga-agbanwe "flat flat" ma ọ bụ ọnụọgụ ndị eweghachitere kama ụkpụrụ Boolean kwesịrị ekwesị, wdg.
Ihe omuma ohuru na Redis 6.0 bu ACL nke bu Ezubere maka iche iji chebe data site na njehie ngwa. Ihe dị mma banyere mgbakwunye a bụ na enwere Redis modul interface maka ACL, nke na-enye gị ohere ide ụzọ nyocha omenala.
Enwekwukwa Cache na ndị ahịa, bụ ihe ọzọ na novelties nke a version, ebe ọ bụ na e megharịrị yhweghaara uzo ndi ozo n'iche iji ojiji nke aha njirimara, nke, bu uzo kacha mma. E wezụga nke ahụ, arụ ọrụ ahụ gbakwunyere na "nnyefe ọnọdụ"Ọ nwere ike ịba uru dị ukwuu iji gbakwunye ọnọdụ ọhụrụ chọrọ ihe nkesa na-ejide ala na ndị ahịa.
Mgbe ị na-eji ọnọdụ nnyefe, sava ahụ anaghịzi agba mbọ icheta igodo ndị ahịa ọ bụla rịọrọ. Kama, ahịa denye aha na isi prefixes. Nsonaazụ mgbanwe a bụ na enwekwaghị ozi, mana naanị maka prefixes ahọrọ ma enweghị mbọ nchekwa na akụkụ nkesa.
Ọzọkwa, a na-akwado mode "opt-in / opt-out" ugbu a, yabụ ndị ọrụ na-ejighi ọnọdụ mgbasa ozi nwere ike ịgwa sava ahụ ihe onye ahịa ya ga-eche iji belata ọnụ ọgụgụ nke ozi abaghị uru.
N'aka nke ọzọ, anyị nwere ike ịchọta ACL ndozi, na na mbu, iwu ACL LOG ọhụrụ na-enye gị ohere ịhụ ndị ahịa niile na-emebi ACL, nke nnweta na-enye iwu ka ha ghara ịme ya na igodo nnweta nke enweghị ike ịnweta ma ọ bụ ndị nwara nyocha ha ada.
Nke abuo, Emegharịrị ọrụ ACL GENPASS, na - eji HMAC nke SHA256 eme ihe ma nabata arụmụka nhọrọ iji gwa sava otu ọnụọgụ pseudo-random eriri ọ chọrọ iji mepụta. Redis na - eweputa igodo di n’ime mgbe / dev / urandom na-ebido wee jiri HMAC na ọnọdụ mgbochi iji mepụta nọmba ndị ọzọ na-enweghị usoro: otu a ị nwere ike ịmegbu API ma kpọọ ya mgbe ọ bụla ịchọrọ, n'ihi na ọ ga-adị oke ọsọ, kọwara onye mmemme.
Mmezi PSYNC2 na-enye Redis ohere ịmegharị ugboro ugboro ugboro ugboro. N'ezie, ị nwere ike belata Ping ikpeazụ na protocol, nke mere na okike na nna ukwu nwere ike ịchọta ntụpọ nkịtị.
Mma Redis nyere iwu na igbu ogeỌbụghị naanị BLPOP na iwu ndị ọzọ nabatara sekọnd nabatara ugbu a nabata ọnụọgụ ọnụọgụ, mana emezigharịrị mkpebi ka ọ bụrụ ihe na-erughị uru "HZ" dị ugbu a, n'agbanyeghị ọnụọgụ nke ndị ahịa ejikọtara.
N’ikpeazụ ihe ọzọ dị mkpa mgbanwe a version bụ aMma RDB faịlụ, nke dị ugbu a ngwa ngwa iji kwado. Dabere na ihe mejupụtara faịlụ ahụ (nnukwu ma ọ bụ obere ụkpụrụ), ịnwere ike ịtụ anya mmụba 20-30%, dabere na onye nrụpụta. Iwu INFO dịkwa ngwa ngwa ugbu a mgbe ejikọtara ọtụtụ ndị ahịa, okwu dị ogologo oge emesiri edozi.
Redis 6.0.0 dị maka nbudata na weebụsaịtị ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » E wepụtalarị Redis 6.0 wee bịa na ọtụtụ ndọtị ama ama
Forbes: mmụba nke Ubuntu na mbelata nke Windows 10
A tọhapụrụ ụdị ọhụrụ nke Firefox 76 na ndị a bụ akụkọ ya